Wednesday, April 20, 2022 Muvhuro, April 25, 2022 Douglas Karr
Kana usati wambowana mukana wekugadzirisa vhidhiyo, iwe unowanzo pinda mumawere ekudzidza. Kune yakakosha software kunze uko yekuchekeresa, clip, uye kuwedzera shanduko usati waisa vhidhiyo yako kuYouTube kana pasocial media saiti… uyezve kune emabhizinesi mapuratifomu akavakirwa kusanganisira maanimation, zvinoyevedza mhedzisiro, uye kubata nemavhidhiyo akareba kwazvo. Nekuda kwebandwidth uye computing zvinodiwa, kugadzirisa vhidhiyo ichiri chiitiko chinonyanya kuitwa munharaunda nedesktop.
Mabhizimusi madiki-nepakati-epakati (maSMB) anotarisana nematambudziko asina kumboitika, ne43% yemabhizinesi akavharwa kwenguva pfupi nekuda kwe COVID-19. Mukuona kwekuenderera mberi kwekukanganisa, kuomesa mabhajeti, uye nekuchenjera kuvhurazve, makambani anoshandira nharaunda yeSMB ari kukwira kuzopa rutsigiro. Facebook Inopa Zvakakosha Zvemabhizimusi Madiki Panguva Yechirwere Facebook nguva pfupi yadarika yatanga chirongwa chemahara chakabhadharwa chepamhepo chigadzirwa cheSMB pachikuva chayo - ichangoburwa kubva kukambani, kubatsira mabhizinesi ane mashoma mabhajeti kuwedzera basa ravo rekushambadzira.
Kubva pakutanga, kuvimbika mibairo yezvirongwa kwakaratidza iyo yekuita-iyo-iwe pachako ethos. Varidzi vebhizinesi, vachitsvaga kusimudzira kudzokorora traffic, vaizodurura pamusoro penhamba dzekutengesa kuti vaone kuti ndezvipi zvigadzirwa kana masevhisi aive akakurumbira uye achibatsira zvakakwana kupa semahara kukurudzira. Ipapo, kwaienda kuchitoro cheko chekudhinda kuti vatore mapepa-makadhi adhindwe uye vagadzirire kupa vatengi. Iri zano rakaratidza kuti rinoshanda, sezviri pachena nenyaya yekuti vakawanda
Iwo Ekumusoro Ekushambadzira Zviitiko zveMabhizimusi madiki nePakati-Akakura
Chipiri, June 7, 2016 Mugovera, Kukadzi 13, 2021 Douglas Karr
Emarsys, anotungamira anopa gore rekushambadzira software kumakambani eB2C, akaburitsa zvakabuda mu-munhu uye ongororo yepamhepo ye254 vatengesi vekutengesa yakaburitswa mukubatana neWBR Dhijitari. Zviwanikwa zvakakosha zvinosanganisira maSMB (mabhizinesi ane mari inosvika $ 100 miriyoni kana pasi) muB2C yekutengesa iri kuvandudza nzira dzeamnichannel dzakatenderedza kubudirira kwakaratidza, vari kushandisa nguva yakawanda kugadzirira mwaka wakakosha wekutenga zororo, uye vari kuyedza kuunza tekinoroji yepamusoro kumberi, uye chengetedza